musha nyika dzakabatana Akasanganiswa Maartist Kaini Velasquez Hupenyu hweMwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Isu tinopa Nyaya Yakazara yeWrestler uye Ex-MMA Nyeredzi uyo anozivikanwa zvakanyanya nezita remadunhurirwa "Cardio Kaini".
Yedu vhezheni yeKaini Velasquez's Biography Chokwadi, kusanganisira yake Yehudiki Nyaya, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ongororo yaKaini Velasquez Hupenyu nyaya inosanganisira kukuudza nezve hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira uye nyaya yekubudirira.
Zvikuru, nhoroondo yaKaini yekufambidzana, hupenyu hwepamoyo, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekusiyana-siyana kwake mune zvehondo uye mutsimba. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kaini Velasquez's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Kaini Velasquez Yehuvana Nyaya:
Kutanga kubva, Kaini Ramirez Velasquez akazvarwa pazuva rechi28 raChikunguru 1982 kuSalinas, California.
Ndiye mwana wechitatu pavana vatatu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake Isabel Velasquez nababa vake, Efrain Velasquez. Tarirai, vabereki vaKaini Velasquez.
Kwakabva Mhuri uye Makore Ekukura:
Nyika yeAmerica yedzinza chena ine midzi yeMexico yakakurira muYuma, Arizona, kwaakakurira nemukoma wake nehanzvadzi; Efrain Velasquez, jr. uye Adela Velasquez zvichiteerana.
Kukurira muYuma, Velasquez akadzidza nezve mafambiro akaita baba vake kubva kuMexico kuenda kuAmerica kunotsvaga hupenyu huri nani.
Akakurudzirwa nerwendo rwababa vake uye akasarudza kushingirira nekushanda nesimba sababa vake.
Kaini Velasquez Biography - Dzidzo:
Nezve kumashure kwedzidzo yaVelasquez, akaenda Kofa High Chikoro mukati memakore mana.
Kutsunga kwake kushanda nesimba sababa vake kwakange kwakanyorwa mupfungwa dzake izvo zvakamuita kuti atore kufarira nhabvu nekurwa sezvo aidzidza muKofa sekondari.
Achiri kuchikoro, Velasquez akatamba nhabvu uye akabatana nechikwata chake chemutsimba chechikoro.
Akatamba nhabvu kwemakore matatu uye akabata timu yake yenhabvu yenhabvu pamwe nechikwata chake chemutsimba panguva yaakahwina mukombe we5A Arizona Wrestling kaviri.
Kaini Velasquez Bio - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Mushure mekupedza kwake kudzidza paKofa High School, Velasquez akanyoresa kuLowa Central Community College kwaakawedzera basa rake retsiva uye akakunda NJCAA National Championship muchikamu chinorema.
Pasina kupera nguva refu mushure mekuwana kwake kwekutanga kuLowa College, Velasquez akatamira kuArizona State University kwaakapinda muHNNUMX kurwira kweSun Devils uye akawana 103 ikunda kubva kumakwikwi ese.
Kaini Velasquez Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Nguva pfupi apedza kudzidza kukoreji, Velasquez akabatana neKickboxing Academy kuitira kusimudzira hunyanzvi hwekurwa uye kuwana mukana wekupinda muMMA kurwa zvinehunyanzvi.
Paacademy, Velasquez akaita nhamburiko dzekuzvisimudzira muhunyanzvi hwese hwaakaona hwakakodzera kumubatsira kuti asvike pakakwirira mumakwikwi emutsimba.
Kutenda kwake mu "kushanda nesimba nguva dzose kunobhadhara" kwakava kuwedzera kwekukurudzira kwakamuita kuti aenderere mberi.
Kaini Velasquez Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Pasina nguva mushure mekunge Velasquez ajoina kickboxing academy, akaita yake MMA kutanga kurwisa Jesse Fujarczyk paStrike simba: Tank vs. Buentello pazuva rechinomwe Gumiguru 7.
Mhedzisiro yemutambo uyu yakazove kukunda mukutsigira Velasquez uyo akahwina neTKO munharaunda yekutanga yemakwikwi.
Achimhanyisa kumberi kusvika parizvino, Kaini Velasquez aimbove wenguva mbiri UFC Heavyweight Champion uye akaita rake rekutanga kuoneka muWWE Championship achiperekedzwa naRey Mysterio pazuva rechina raGumiguru 4.
Ivo vaviri vakatsiva pa Brock Lesnar yekurwisa Mysterio nemwanakomana wake, Dominick pakutanga muvhiki imwe chete. Velasquez yakarongerwa kurwa Lesnar kuCrown Jewel yeWWE Championship pazuva re31st raGumiguru 2019.
Kaini Velasquez Hukama Hupenyu Chokwadi:
Kaini Velasquez akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo.
Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Velasquez akabatanidzwa kune mumwe chete mukadzi kubva pakutanga kwebasa rake.
Iye akasanganiswa wemaartist anga ari muhukama hwenguva refu hwekudanana nemusikana wake, Michelle.
Shiri mbiri dzerudo dzinonzi dzakatanga kufambidzana kubvira 2007 uye vakava nemwana wavo wedangwe kubva pahukama hwavo pazuva rechitanhatu raMay 6.
Makore mashoma mushure mekuzvarwa kwemwanasikana wavo, Velasquez naMichelle vakatora hukama hwavo kuenda padanho rinotevera nekusunga pfumo pazuva re28th raMay 2011.
Imba yavo yakapawo kuberekwa kwemwana wavo wechipiri. Velasquez naMichelle vane vana vaviri; mwanasikana nemwanakomana panguva yekunyora.
Kaini Velasquez Hupenyu Hwemhuri:
Velasquez anobva kumhuri yepakati - yemhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaKaini Velasquez:
Efrain Velasquez ndibaba vaKaini Velasquez. Akatama kubva kuSinaloa, Mexico kuenda kuUnited State semunhu asina magwaro.
Paaive kuUS, akasangana neAmerican-akaberekerwa Isabel uyo waakaroora uye akaita nevana vatatu naye. Efrain aive wekutanga kukurudzira kwaive naVelasquez paakange achikura.
Nezve amai vaKaini Velasquez:
Isabel Velasquez aive amai vaKaini Velasquez. Iye akazvarwa mune dzakabatana nyika kwaakakurira uye akasangana nemurume wake, Efrain. Akarasikirwa nehupenyu hwake kune inotonhora ruoko rerufu pazuva re18th yaaugust 2019.
Nezve hama dzaKaini Velasquez:
Velasquez ane vakoma vaviri. Mukoma wake ndiEferain Velasquez, jr. nepo hanzvadzi yake mukuru ndiAdela Velasquez. Kwete nhau zhinji dzinozivikanwa nezvehama dzake.
Kure kubva kumhuri yepedyo yaVelasquez, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezveambuya vake amai nasekuru pamwe nasekuru nasekuru vake. Zvakare hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini nasekuru pamwe nababamunini vake.
Kaini Velasquez Chokwadi:
Chii chinoita kuti Velasquez akanganise? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuti uwane izere mufananidzo wake. Kutanga, Velasquez's Persona isanganiswa yeLeo zodiac maitiro.
Iye murwi ane tarenda repamusoro ane maitiro akasarudzika ekudzikisa pasi muvengi wake nezvibhakera.
Zvaanofarira nezvaanofarira hazvingogumiri pakurwa chete asiwo zvinosanganisira nhabvu. Aizoshandisa nguva yake yekusununguka kutamba nhabvu.
Kaini Velasquez Mararamiro:
Velasquez ine network inofungidzirwa yemamiriyoni mana emadhora panguva yekunyora. Kwaakabva hupfumi hwake kunobva zvakanyanya kubva mukubata kwake simba uye kuongororwa kwemashandisiro ake emari zvinoratidza kuti anorarama hupenyu hwemutambarakede.
Kutanga nemidziyo yaVelasquez, akange atenga imba kuGilroy, California Mugore ra2012.
Imba iyo yakafukidza nzvimbo inenge 5,100 sq.
Iyo yakavhenganiswa yemitambo ine muunganidzwa wemhando dzakasiyana dzemotokari dzakanaka. Mota dzinosanganisira; iyo 1971 Ford Torino Cobra uye ine burly 2011 ina-musuwo Ford F-150 SVT Raptor kutaura mashoma.
Kugumisa yedu Velasquez yevacheche nyaya uye biography pano ndidzo dzisina kutaurwa kana kushoma-dzinozivikanwa iwe dzausina kumboziva nezvake.
Kaini Velasquez Nickname Chokwadi: Velasquez akatumidzwa zita "Cardio Kaini" nekuda kwekuenderana kwake mukudzidziswa kwemoyo.
Kudzidziswa kwacho kwakamuwanisa kutsungirira kwakakura kuti arambe achirwa nevadzivisi vake zvine hukasha mushure mekunge vaneta.
Zita rake remadunhurirwa rinongotenderwa kumabasa ake ekudzidzisa achiri mune rake rehunyanzvi MMA basa, haana zita remadunhurirwa.
Kaini Velasquez Tattoo Chokwadi: Velasquez ane chete inozivikanwa tattoo. Akanyora nyora pachifuva chake nechinyorwa chinonzi "Brown Pride" uye akataura kuti iyo tattoo inomiririra mutero kunhaka yake yekuMexico.
Velasquez uyo anga aine tarenda rekuAmerica nhabvu uye akatamba sengebackback akawana dzidziso yekuti atambe nhabvu kuArizona State. Akaramba basa racho akasarudza kuita basa rekurwa.
Chitendero chaKaini Velasquez:
Nezve chinamato chaKaini Velasquez, chiripo ruzivo rwekuti munhu asiri wechitendero. Anoda kuchengeta upenyu hwake hwomunhu oga uye haana chinongedzo kuchitendero chipi nechipi.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kaini Velasquez Childhood Nhau uye Untold biography chokwadi.